Nagarik Shukrabar - ज्ञानेन्द्रको डिस्को पोलिटिक्स
सोमबार, १९ जेठ २०७७, ०६ : ३७
शुक्रबार, ०६ मङि्सर २०७६, १२ : १९ | केपी ढुंगाना
सामाजिक सञ्जाल, मिडिया अनि राजनीतिमा अहिले कालापानी र लिपुलेक छाएको छ। कालापानी कब्जा गरेर भारतीय सीमा सुरक्षा बल बसेको २०१४ सालदेखि नै हो तर जम्मु काश्मिरलाई केन्द्र शासित बनाएलगत्तै भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि कालापानीलाई आफ्नो नक्सामा पारेपछि बहसमा आयो सीमा।
अहिले पनि सामाजिक सञ्जालको हट टपिक यही छ। कालापानी कसरी फिर्ता ल्याउन सकिन्छ, बौद्धिक वर्ग गम्भीर बहसमा देखिन्छन्। सत्तापक्षका हुन् या प्रतिपक्ष दलका नेता, उनीहरु राष्ट्रभक्तिले ओतप्रोत भाषणमै केन्द्रित छन्।
नेपालमा भारतविरोधी चर्का नाराबाजी लाग्न थालेपछि दिल्ली तात्ने नै भयो। झन् चिनियाँ अधिकारीले विज्ञप्तिमार्फत ‘नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको सधैँ सम्मान गर्ने’ भनेर चुस्स आगोमा घिऊ हालिदिएपछि चिसो मौसममा भारतीय अधिकारीलाई घोच्ने नै भयो। घोचेको देखियो पनि।
देशप्रेममा सडक तात्दा सहरी भेगका केही क्षेत्रका दृश्य बदलिएका थिएनन्।
देशप्रेमले ओतप्रोत हुँदै सीमामा राष्ट्रिय झण्डा गाड्न हिँड्दा अनि दुतावासअगाडि चर्का नारा लगाएर प्रहरीको बुट र लाठी खाइरहँदा उही उमेर समूहका ग्रुप भने रात्रिकालीन मनोरञ्जनमा मग्न थिए र छन्। सीमा बिथोलियोस् तर पब, बार र लाउन्जमा मदिरा र संगीतको तालमा झुम्ने उनीहरुको दैनिकी नबिथोलिए पुगेझैँ देखियो उनीहरुको मुड र त्यो मुड अझै उस्तै छ।
उनीहरु मात्रै हैन, सिमाको समस्या छाडेर लाउन्जमा मस्ती गर्न पुग्नेमा देशप्रेमी प्रौढ पनि देखिए यही छेकोमा। गत शनिवार बेलुका साढे ११ बजेतिर ठमेलको चल्तीको लाउन्ज एलओडीमा रात्रिकालीन मनोरञ्जनमा रमाउन पोख्त जमात फ्लोरमा लाउड म्युजिकमा नाचमा मस्त भएका बेला छिर्केमिर्के ढाकाटोपी र खैरो कोटमा वरिपरि ढाकाटोपीधारीले घेरिएर यस्तै एक प्रौढ ठमेलको एलओडी लाउन्जमा छिरेका थिए।
केही महिलासहित एलओडी पुगेका उनी सुरक्षा घेरासहित लाउन्जको भिआइपी टेबलतिर गए। लाउन्जमा उनको प्रवेशसँगै म्युजिकको लय बदलिँदै लाउड डान्सिङ नम्बरको साटो मध्यरातमा ‘रातो र चन्द्रसूर्य’ पो बज्न थाल्यो !
भिआइपी बाल्कोनीमा पुगेर उनी भिडतिर हात हल्लाउँदै म्युजिकको तालमा झुम्न थाले। कहिले नृत्य, कहिले भिडतिर फ्ल्याइङ किसको वर्षा हुन थालेपछि भिडको ध्यान त्यतै तानिने नै भयो।
डान्स फ्लोरमा रहेकाहरुको ध्यान बाल्कोनितिर थियो। उनी त्यत्तिमै रोकिएनन्। कोटै फुकालेर नाच्न थाले। भ-याङबाट झरेर भिडमै हेलिदै डान्स फ्लोरमा रहेका युवतीका हात समात्दै नाचे।
रमाइलो मुडमा देखिएका ती अधबैंसे थिए, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र। छोरा पारस युट्युबर सोनिका रोकायालाई सुधार्न कहिले पोखरा त कहिले अन्नपूर्ण क्षेत्रमा बरालिइरहेका छन्। पिता ज्ञानेन्द्र भने मध्यरातमा छोरी प्रेरणा र बुहारी हिमानी शाह लिएर लाउन्जमा पुगे। उनलाई वरिपरि घेरा हाल्नेमा थिए, सुरक्षाका लागि राज्यले दिएको सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मी।
उनी करिब दुई घण्टा लाउन्जमा बसे। भिआइपी टेबलमा परिवारका साथ ड्रिंक्स लिए। लाउन्ज व्यवस्थापकका अनुसार त्यो टेबलको रेट ६० हजार रुपैयाँ हो। उनीसँगै गएका केहीले बियर मगाएका थिए। दुई घण्टा बिताएर पूर्वराजा बाहिरिए।
अधिराजकुमार, संवैधानिक राजा, सक्रिय राजा हुँदै पूर्वराजामा परिणत भएका उनका विभिन्न मुड र चरित्र देखिएकै हो। शनिबार बेलुका जुन दृश्य देखियो, त्यो भने बिल्कुल भिन्न थियो। उनको त्यो बिन्दास मुड सार्वजनिक स्थलमा देखिएको थिएन।
उनको पहिलो सरप्राइज युवराजबाट राजा हुनु थियो। दोस्रो सरप्राइज राजतन्त्र अन्त्य भयो भने त रक्तपातै हुन्छ भन्ने निष्कर्ष गलत साबित गर्दै सहजै नारायणहिटी छाड्नु थियो। तेस्रो सरप्राइज लाउन्जमा म्युजिक र मदिरामा लट्ठिएको जमातका बीचको मस्ती थियो।
धार्मिक पीठबाट डिस्कोतिर
राजतन्त्रको अन्त्यसँगै २०६५ जेठ २९ मा कोलाहलका बीच सम्बोधन गरेर नारायणहिटी छाडेर निर्मल निवास छिरेका ज्ञानेन्द्र विभिन्न बहानामा नागरिकमाझ उपस्थिति जनाई नै रहे। राष्ट्रप्रमुखको रुपमा राष्ट्रपतिले औपचारिकता निभाए पनि राजतन्त्रकालका संस्कार छाडेनन्। कहिले पश्चिम क्षेत्र भ्रमणमा निस्कन्थे त कहिले शक्तिपीठको दर्शन भन्दै मधेसका जिल्ला पुगिरहन्थे। पोखरा यात्रा पनि जारी राखे उनले।
तर दुई वर्षदेखि नागरिकमाझ आफ्नो उपस्थिति देखाउने उनको शैली बदलियो। धार्मिक भ्रमण अनि प्रमुख आतिथिका रुपमा निम्त्याइएका कार्यक्रममा सहभागी हुनेबाहेक निर्मल निवास र पारिवारिक जमघटमा बिताउन थालेका उनले पछिल्लो समय रात्रिकालीन मनोरञ्जनमा समेत सहभागी हुन थाले। कहिले त्रिसरा लाउन्ज त कहिले किङ्ग्स लाउन्जमा देखिइरहे उनी परिवारसाथ।
उनी प्रायः लाजिम्पाटको त्रिसलामा परिवारका साथमा बढी देखिए। दरबारमार्गको किङ्ग्स लाउन्जमा पनि देखिएका थिए उनी। लाउन्जमा जाँदा त्यहाँ उपस्थित केहीले आग्रह गरेका खण्डमा सँगै तस्बिर खिचे पनि लाउन्जमा लठ्ठिएका ग्राहकसँगै फ्लोरमै उत्रिएर डान्स गर्ने गरेको भने देखिएको थिएन।
दरबारमार्ग र लाजिम्पाटका लाउन्जमा देखिए पनि उनी रात्रिकालिन मनोरञ्जनको हब ठमेलमा देखिएका थिएनन्। गत शनिबार भने उनी एलओडिमा पुगेर ठमेल पनि प्रवेश गरे र कम्मरसमेत मर्काए लाउन्जका ग्राहकसँगै।
उनी मात्रै हैन बुहारी हिमानी र छोरी प्रेरणा पनि रमाइलो गर्ने मुडमा थिए र रमाए पनि। ज्ञानेन्द्र नाच्दा उनीहरुको पनि खुट्टा रोकिएनन्। हिमानी र प्रेरणाले पनि हल्का कम्मर मर्काए।
पूर्व राजपरिवार भए पनि नागरिक तहमा क्रेज कायमै छ, राजपरिवारका सदस्यको। अति कडा अनुशासनमा बस्नुपर्ने भनिएको राजपरिवारका सदस्यले परिवारको मुलीसामु सार्वजनिक स्थानमा गरेको मस्ती छक्कै पार्ने थियो। यसले उमेर ढल्किएसँगै ज्ञानेन्द्र निरंकुशबाट उदार हुँदै गएको देखाउँछ।
रमाइलो मुड या बदलिएको रणनीति
दरबार हत्याकाण्डसँगै अकस्मात उनको काँधमा आएको राजतन्त्रको सिंहासन उनी ज्यूँदैछँदा समाप्त भएको थियो। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको उपलब्धिका रुपमा गणतन्त्रको व्याख्या हुने गरे पनि दरबार हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको परिवारको हत्यासँगै शक्तिमा आएका ज्ञानेन्द्रको नकारात्मक छवि र सक्रिय राजतन्त्र फर्काउने प्रयास पनि राजतन्त्र अन्त्यको कारक थिए।
आम नागरिकबाट दरबारलाई टाढा बनाउने मुख्य कारण उनको शंकास्पद छवि नै थियो। सक्रिय राजतन्त्र फर्काउन खोज्दा शुभेच्छुक राजनीतिक दल पनि विपक्षमा उभिदा उनको श्रीपेच गुम्यो र कोलाहलबीच पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘परम्परागत रुपमा शाह वंशीय राजाहरुबाट प्रयोग भई शाहवंशको विरासतको रुपमा रहेको श्रीपेच र राजदण्ड चिरकाल सुरक्षित रुपमा राख्ने गरी संरक्षणका लागि नेपाल सरकारसँग रहने गरी मैले हस्तान्तरण गरेको छु’ भन्दै नारायणहिटीबाट बाहिरिन बाध्य भए।
पूर्वराजाको रुपमा उनका गतिविधिले मुकुट र राजदण्डसँगै दरबार छाडे पनि पुनः शक्तिमा फर्कने अभिलाशा भने छाडेको देखिएन। उनले बेलामौकामा दलहरुप्रति लक्षित राजनीतिक अभिव्यक्ति दिइनै रहे। धार्मिक र व्यक्तिगत भ्रमणको रुपमा नागरिकसँग नजिक हुने प्रयास कायम राखे।
‘जनताले एकचोटी नारायणहिटी छोड, हाम्रो माझमा आएर एकचोटी हिँडिदेऊ, बसिदेऊ, अरुलाई एकचोटी चलाउन दिएर हेर न भनेर जनताले भनेको’ भन्दै राजतन्त्र फर्कन सक्ने संकेतहरु छरिरहे। राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने दलहरु पनि झस्किरहे उनीसँग।
तीन वर्ष अगाडिको हिन्दु सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दा उनले ‘बितेका केही वर्षका राजनीतिक चरम बाह्य हस्तक्षेप, जनतामा चरम निराशा हाम्रा लागि अभिशापसिद्ध भएका छन्। यस्तो जटिल परिस्थिति किन र कसरी श्रृजना भयो, यसका कारक तत्व के–के हुन् भन्ने कुरा अब नेपाली जनताले नै प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भएको छ,’ भन्दै राजनीतिक दलप्रति आम नागरिकलाई आक्रामक बनाउने प्रयास नगरेका पनि हैनन् तर भाँचिइसकेको राजतन्त्र पुनस्र्थापित गर्न सक्ने तहको नागरिक समर्थन उनले पाउन सकेका छैनन्।
तर अहिले आम नागरिकसँग निकट हुन धार्मिक मठ मन्दिरको भ्रमण छाडेर उनी एकाएक लाउन्जमा पुग्दै विन्दास पुस्तासँग निकट हुने प्रयास कतै आम नागरिकको मनमा वीरेन्द्रकालझैँ राजतन्त्रप्रति बलियो आस्था फर्काउने अभ्यास त हैन ?
यो रमाइलो मुडको रुपमा बदलिएको रणनीति त हैन ?
संवैधानिक राजतन्त्रको राजनीतिक मुद्दा बोकिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लाउन्जमा देखिएको ज्ञानेन्द्रको मुडबाट हौसिएको देखियो। एलओडीमा नाचिरहेका ज्ञानेन्द्रको भिडियो क्लिप टुइट गर्दै राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले दिएको अभिव्यक्तिले त्यही देखाउँछ।
‘राप्रपाले परिकल्पना गरेको राजा सहितको लोकतन्त्रको एक उपमा, जनताको राजा, नागरिक राजा,’ थापाले टुइट गरे, ‘जनताको सुखमा रमाउने, दुःखमा चिन्तित रहने, जनताको साथमा रहने। संविधानको परिधिभित्र रहने, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक राजसंस्था।’
ज्ञानेन्द्रको कम्मर मर्काइबारे नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आलोचना गरेलगत्तै थापा प्रतिवादमा उत्रिएका थिए धनगढीमा। ‘राजा व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवनसँग सम्बन्धित समारोहमा नाचेको घटनालाई लिएर शीर्ष तहको नेताबाट जुन ढंगले अभिव्यक्ति आएको छ, यो कमजोर र हतास मानसिकताको उपज हो। गणतन्त्रको जग कमजोर रहेको यसबाट पुष्टि हुन्छ,’ भन्दै थापाले दाहालको आलोचना गरेका थिए।
थापाका अभिव्यक्तिबाट ज्ञानेन्द्रको गतिविधिबाट जनताको मनमा राजतन्त्रप्रतिको आस्था बढ्ने र खोपीको देउताको रुपमा स्वीकार गर्ने वातावरण पुनः बन्ने आशा पलाएको झल्को देखिन्छ।
तर राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटा मन्दिरमा गएर पाएको केही सहानुभूति नाइट क्लबमा गएर नबढ्ने बताउँछन्। ज्ञानेन्द्र भिजनहीन व्यक्ति रहेको उनको ठोकुवा छ।
‘यसो हेर्दा रमाइलो गर्न गएझैँ देखिन्छ,’ सापकोटाले भने, ‘नाइट क्लबमा गएर जनताको मन जित्छु भन्ने सोचेका छन् भने त्यो उनको मुर्खता हो। नाइट क्लबमा गएर जनतासँग जोडिन सकिदैन।’
सापकोटाको विश्लेषणमा ज्ञानेन्द्रसँग राष्ट्रिय मुद्दाका विषयमा दृष्टिकोण नै छैन। राजतन्त्र हटेपछि उनी देशमा समस्या छ भनेर बोले पनि के गर्दा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नबोल्नु उनको दृष्टिकोणको अभाव रहेको बताउँदै उनका पालामा राजतन्त्र फर्किन सम्भव नै नभएको बताउँछन्।
थापा हौसिए पनि दरबारप्रति सहानुभूति जनाउनेहरु पनि एलओडीमा ज्ञानेन्द्रको व्यवहारबाट त्यत्ति खुसी भएको भने देखिएन। दरबारप्रति सफ्टकर्नर राख्ने संस्कृतिविद् गोविन्द टण्डन लाउन्जमा नाचेको दृश्यबाट असन्तुष्ट देखिए।
‘नाइट क्लबमा जानुअघि आफ्नो उमेर तथा गरिमा हेर्नुपथ्र्यो,’ टण्डनले भने, ‘त्यसमाथि पनि बुहारी र छोरीजस्ता परिवारका सदस्यसँग नाइट क्लबमा जानु ठीक हैन। उनी यसरी नाइट क्लबमा जाँदा सबै उमेर समूहका व्यक्ति नाइट क्लबमा जाँदा हुन्छ भन्ने सन्देश जान सक्छ। उनले व्यक्तित्वको हिसाबले समेत विचार पु-याउनु पथ्र्यो, पु-याएनन्।’
प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल पूर्व राजा भएर पनि जनताको जस्तो सामान्य जीवन देखाउन नाइट क्लबमा नाचेको बताउँछन्।
‘जनताजस्तै नाचगान गरेर जनताको सहानुभूति क्यास गर्न नाइट क्लबमा नाचेका हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘अप्रत्यक्ष रुपमा जनताको मन जित्ने उद्देश्य पनि हुन सक्छ।’
कालापानीमा किन मौन ?
राष्ट्रिय अखण्डता, स्वतन्त्रतामा निकै चिन्तित देखिने ज्ञानेन्द्र नेपाली भूमि भारतीय नक्सामा पारिएको घटनामा भने मौन छन्। राजसंस्था नभए नेपालै रहँदैन भन्ने दाबी गर्ने उनका लागि आफ्नो दाबी बलियो बनाउने मौका हो, यो दुखद् अवस्था तर उनी मौन छन्।
राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको उदयमा तत्कालीन भारतीय सत्ताको महŒवपूर्ण भूमिका रहेको यदाकदा अहिले पनि विश्लेषण हुने गरेको छ। सक्रिय राजतन्त्रकालमा चीनलाई सार्कमा प्रवेश गराउने उनको प्रयास नै गणतन्त्रको उदयको मूल कारण भन्ने तर्क अझै कायमै छ।
यो तर्कमा दम भए ज्ञानेन्द्रका लागि अहिलेको अवस्था भारतसँग साटो फेर्ने, अनि आम नागरिकमा राजसंस्थाको राष्ट्रभक्तिप्रति विश्वास बढाउने राम्रो मौका नै हो तर उनी मौन छन् किन ?
नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्यताका भारतमा कांग्रेस आई सत्तामा थियो। अहिले हिन्दुवादी सोचले ओतप्रोत भारतीय जनता पार्टी। राजतन्त्रको अन्त्यसँगै नेपाल हिन्दु राज्यबाट धर्म निरपेक्ष बनेकोमा बिजेपीको नेतृत्व तह असन्तुष्ट रहेको पटक–पटक सार्वजनिक भइरहेकै छन्।
राजतन्त्र फर्काए मात्र नेपाल पुनः हिन्दु राज्य बन्न सक्ने तर्क पनि सुनिन्छ। ज्ञानेन्द्र र बिजेपीका केही नेता बीचको हिमचिमले अहिले भारतीय सत्ताधारी दलसँग उनको सम्बन्ध सुमधुर रहेको देखिन्छ नै।
कालापानीबारे बोल्दा बल्लतल्ल बनाएको सम्बन्धमा चिसोपना बढ्ने भएकाले उनी मौन बसेको देखिन्छ।
‘भारतमा बिजेपीको सरकार हुँदासम्म उनी बोल्दैनन्,’ राजनीतिक विश्लेषक सापकोटाले भने, ‘किनभने उनमा बिजेपीको सहयोगमा नेपालमा राजसंस्था फर्किहाल्छ कि भन्ने झिनो आशा हुन सक्छ तर त्यो सम्भव छैन।’
प्राध्यापक पोखरेलको विश्लेशणमा कालापानीबारे बोल्दा आफैँतिर प्रश्न सोझिनसक्ने सम्भावना देखेर ज्ञानेन्द्र मौन बसेको बताउँछन्।
‘कालापानीको समस्या आजको हैन, राजसंस्था हुँदादेखिकै हो,’ प्राध्यापक पोखरेलले भने, ‘यो विषयमा बोल्दा प्रश्न आफैँतिर फर्किन सक्ने भएकाले नबोलेका हुन सक्छन्।’
सहज छैन फर्कन
ज्ञानेन्द्रको बदलिएको व्यवहारले देखाउँछ, जति प्रयास गरे पनि पूर्व भइसकेको राजतन्त्र फर्काउन सम्भव छैन। भारतीय सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी केही लचिलोझैँ देखिए पनि अहिले राजतन्त्रको पक्षमा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र देखिएका छैनन्।
आन्तरिक शक्ति राजनीतिक दलमध्ये पूर्वपञ्चहरु नै संगठित हुन नसकेर टुक्रा–टुक्रा भइरहेका छन्। राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको स्थापना गरे पनि राजपरिवारकै शैलीमा अभ्यस्त हुँदै गएका दलका नेताका कारण नागरिकमाझ चरम असन्तुष्टि छ तर अहिले नै आम नागरिक राजनीतिक दलको विकल्पको खोजीमा राजतन्त्रको पक्षमा उभिने सम्भावना छैन।
पञ्चहरुको दललाई एकीकृत बनाउने असफल प्रयास, राजतन्त्र फर्काउन आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको अभाव र दलहरुप्रति तीव्र असन्तुष्टि बढ्दै गए पनि तत्काल विद्रोहको मानसिकतामा गई नहाल्ने आम नागरिकको मनस्थिति बुझेरै हुनुपर्छ, ज्ञानेन्द्र अब आफैंलाई बदल्दै छन्।
उनको व्यवहारबाट देखिदैछ, अब उनी राजतन्त्र फर्काउने ह्याङबाट मुक्त भएर पूर्वराजाको रुपमा बिन्दास रिटायर्ड लाइफ बिताउन चाहन्छन्। एलओडीमा बदलिएको ज्ञानेन्द्रको छवि यसैको प्रारम्भ हो।
‘जनताको सुखमा रमाउने राजसंस्था’
जनताको सुखमा रमाउने, दुःखमा चिन्तित रहने, जनताको साथमा रहने। संविधानको परिधिभित्र रहने, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक राजसंस्था।’
–राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा
‘विचार पु-याउनु पथ्र्यो, पु-याएनन्’
‘नाइट क्लबमा जानुअघि आफ्नो उमेर तथा गरिमा हेर्नुपथ्र्यो। त्यसमाथि पनि बुहारी तथा छोरीजस्ता परिवारका सदस्यसँग नाइट क्लबमा जानु ठीक हैन। उनले व्यक्तित्वको हिसाबले समेत विचार पु-याउनु पथ्र्यो, पु-याएनन्।’
‘ज्ञानेन्द्रसँग भिजनै छैन’
‘पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग राष्ट्रिय मुद्दाका विषयमा दृष्टिकोण नै छैन। उनी राजतन्त्र हटेपछि देशमा समस्या छ भनेर बोल्छन् तर के गर्दा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बोल्दैनन्। उनीसँग समस्या समाधानको आइडिया नै छैन। उनको सोलुसन राजसंस्थाको फिर्ती हो तर उनको पालामा राजतन्त्र फर्किन सम्भव छैन।’
–विष्णु सापकोटा, राजनीतिक विश्लेषक
‘जनताको मन जित्न नाचेको हुनसक्छ’
‘पूर्वराजा भएर पनि जनताको जस्तो सामान्य जीवन देखाउन नाइट क्लबमा नाचेका हुन सक्छन्। जनताको मन जित्न पनि हुन सक्छ। जनताजस्तै नाचगान गरेर जनताको सहानुभूति क्यास गर्न पनि नाइट क्लबमा नाचेका हुन सक्छन्। अप्रत्यक्षरुपमा जनताको मन जित्ने उद्देश्य हुनसक्छ।’
– प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल
लाउन्जमा ज्ञानेन्द्रकाे दुई घण्टा
यतिबेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका छन्। भाइरल हुने पालो उनका छोरा पारसले यसअघि नै लिइसकेका छन्, सोनिकासँगको उनको सम्बन्धका कारण।
गत आइतबार नाइट क्लब एलओडी (लर्ड अफ दि ड्रिंक्स)मा कम्मर मर्काएको भिडियोले ज्ञानेन्द्रलाई भाइरल बनायो। अधिकांशले सामाजिक सञ्जालमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र नाचेको भिडियोलाई सामाजिक सञ्जालमा राखेर त्यसप्रति आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका छन्। गमक्क परेर मुस्कानसहित कम्मर मर्काएका ज्ञानेन्द्रसँगै एलओडीमा पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाह लगायत ११ जना पुगेका थिए।
रिजर्भेसन म्यानेजर सहदेव सेढाईँका अनुसार, एलओडी आउनुअघि पूर्वराजाको तर्फबाट सूचना पठाइएको थियो। सूचना पठाएको २५ मिनेटपछि टोली एलओडीमा प्रवेश गरेको थियो।
‘पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र ११ः३० मा आउनु भएको थियो,’ सेढाइँले भने, ‘त्यतिखेर क्लबको क्राउड ठिकै थियो। उहाँहरुले भिआइपी टेबल रिजर्भ गर्नुभएको थियो। त्यहाँ आएर उहाँले सुरुमा क्लबका सबै ठाउँमा डुल्नु भयो। त्यहाँ भएका सबैसँग हात पनि मिलाउनुभयो। हामीले नेपाली गीत बजायौं। उहाँले नाच्नु पनि भयो। एकदम रमाइलो गर्नुभयो।’
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले एलओडीमा गरेको खर्चबारे भने उनले बताउन चाहेनन्। आफूलाई त्यसबारे केही थाहा नभएको उनले बताए। उनका अनुसार उक्त भिआइपी टेबलको खर्च भने ६० हजार रुपैयाँ हो। ठूलो समूहका केहीले उक्त टेबल रिजर्भ गरेमा उक्त दररेट लाग्ने गरेको उनले बताए।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा ज्ञानेन्द्रसँग फोटो खिचाएको सेलेब्रेटीका तस्बिर पनि चर्चामा छ। अभिनेत्री केकी अधिकारी र रीमा विश्वकर्माले ज्ञानेन्द्रसँग फोटो खिचाएका छन् भने बेनिशा हमालको फेसबुक स्टोरीमा ज्ञानेन्द्रको नृत्य देखिन्छ।
त्यस दिन कमेडी च्याम्पियनको टिम एलओडीमै थियो। अभिनेत्री केकी अधिकारी, विशाल भण्डारी, रीमा विश्वकर्मा एलओडीकै रविन श्रेष्ठसँग सोको प्रिमियरका लागि भेन्युको छलफल गर्दै थिए। छलफल सकेर फर्कने क्रममा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह परिवारसहित आउँदै गरेको खबरले उनीहरु त्यहाँ रोकिए।
‘सात दिनपछि हाम्रो कमेडी च्याम्पियनको प्रिमियर सोका लागि भेन्युको लागि छलफल गर्न त्यहाँ पुगेका थियौँ,’ कार्यक्रम निर्मातामध्ये एक केकीले भनिन्, ‘त्यतिखेर उहाँहरु आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि भेटेरै फर्किऊँ भन्ने भयो। फेरि उहाँहरुले जुन ठाउँमा सिट रिजर्भ गर्नु भएको थियो, त्यसैको छेमा हाम्रो सिट थियो। त्यसैले उहाँहरुलाई २० मिनेट कु-यौँ। उहाँहरु आउनु भयो। माहोल एकदमै रमाइलो बन्न पुग्यो। पूर्व राजाले सामान्य नागरिक भएर सबै जनासँग नाचिरहनु भएको थियो।’
‘पूर्वराजाले आफ्नो जिन्दगीलाई पूर्ण रुपमा जिएको मैलै देखेँ,’ केकीले भनिन्, ‘आफूले आफैँलाई स्वीकारेर जिन्दगीसँग कुनै गुनासो नरहेको मैले उहाँलाई देख्दा अनुभव गरेँ।’
केकीलाई आश्चर्य लागेको पक्ष चाहिँ ज्ञानेन्द्रले ‘तपाईं केकी अधिकारी होइन ?’ भन्दै थपेका थिए, ‘म तपाईंलाई चिन्छु नि ! फिल्म पनि हेरेको छु।’